أيوب 23 NAV - Hiob 23 ASCB
1Na Hiob buaa sɛ,
2“Ɛnnɛ mpo, mʼabooboodie mu da so yɛ den;
ne nsa ayɛ den mʼapinisie nyinaa akyi.
3Sɛ menim baabi a mɛhunu no;
anaasɛ mɛtumi akɔ ne tenaberɛ a,
na magye akyinnyeɛ bebree.
5Anka mɛte mmuaeɛ a ɔde bɛma me,
na madwene deɛ ɔbɛka ho.
6Ɔde tumi a ɛso bɛtia me anaa?
7Ɛhɔ deɛ nnipa tenenee bɛtumi aka nʼasɛm wɔ nʼanim,
na wɔbɛgye me afiri me ɔtemmufoɔ nsam afebɔɔ.
8“Nanso sɛ mekɔ apueeɛ fam a, ɔnni hɔ;
sɛ mekɔ atɔeɛ fam nso a, menhunu no.
9Sɛ ɔreyɛ adwuma wɔ atifi fam a, menhunu no;
sɛ ɔdane ne ho kɔ anafoɔ fam a, mʼani nhye ne ho.
10Nanso, ɔnim ɛkwan a me nam soɔ;
na sɛ ɔsɔ me hwɛ a, mɛfiri mu aba sɛ sikakɔkɔɔ.
na manante nʼakwan so a mammane.
12Mentwee me ho mfirii mmaransɛm a ɛfiri nʼanom ho,
mama asɛm a ɛfiri nʼanom ho ahia me asene me daa aduane.
13“Nanso ɔbiara nni hɔ ka ne ho, na hwan na ɔbɛtumi atia no?
14Ɔhwɛ ma ne ɔhyɛ nsɛm tia me;
ɔda so kora nhyehyɛeɛ a ɛte sei bebree.
15Ɛno enti na mebɔ hu wɔ nʼanim;
na sɛ medwene yeinom nyinaa ho a, mesuro no.
16Onyankopɔn ama mʼakoma aboto;
Otumfoɔ ama mabɔ huboa.
17Nanso esum no mma menka mʼano ntom,
esum kabii a ɛkata mʼanim no mpo.
ASCB : Hiob 23